Meydka General Galaal oo loo qaaday Magaalada Guriceel – AfmoNews
Meydka General Galaal oo loo qaaday Magaalada Guriceel
Allaha u naxariistee General Maxamed Nuur Galaal ayaa meydkiisa loo qaaday Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, si halkaasi loogu aaso.
Meydka marxuumka ayaa galabta diyaarad looga qaaday Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyadoo jananka uu ka mid ahaa dadkii shalay lagu dilay weerarkii Hotel Afrik.
Qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa ku sugan Garoonka Guriceel, si ay halkaasi uga qaadaan meydka marxuumka, uguna aasaan duleedka magaalada.
Madaxda Dowladda Federaalka ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid jananka, oo ka mid ahaa Saraakiishii hore ee Ciidanka Xoogga Dalka.
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Waxaan Alle u weydiinayaa naxariistiisa Janno dhammaan muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku naf waayey weerarkan bahalnimada ah ee argagixisada Alshabaab ay ka fuliyeen Hotelka Afrik, waxaan si gaar ah ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeynayaa geerida General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa ruug-cadaagga Ciidanka Soomaaliyeed, door wanaagsanna ka soo qaatay tayeynta iyo dhismaha Ciidanka Qalabka Sida.” Ayuu yiri Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isna sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ku xusuusan doonaan General Galaal kaalintii uu ka soo qaatay difaaca dalka muddadii 50-ka sano ka badneyd, ee uu ka mid ahaa Saraakiishii udub dhexaadka u ahaa Ciidanka Xoogga Dalka.
Ururka Al Shabaab oo sheegtay masuuliyadda weerarkii Hotel Afrik ayaa sheegay in bartilmaameedkoodu uu ahaa General Galaal.
Marxuum Ugaas Xasan oo lagu wado in lagu aaso deegaanka Halgan
Puntland oo dalbatay in xilalka laga qaado Taliye-yaasha Ciidamada Dowladda
Dowladda Somaliya oo soo rogtay awaamiir cusub
WARKA HABEEN 8:00PM (24-02-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia